Iimfihlakalo ezizukileyo zeRosari Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iimfihlakalo ezizukileyo zeRosari
Iimfihlakalo ezizukileyo, sisiqwenga samaKatolika seRosari, kuba sesokugqibela kuthotho lwezine, zeemfihlakalo ezintlanu. Emva kweemfihlelo ezivuyisayo zesibhengezo kunye nobuntwana bukaYesu, i Iimfihlakalo ezikhanyayo yobomi bukaKristu, kunye neemfihlakalo ezibuhlungu zomnqweno. Ezi "mfihlakalo zizukileyo" zezona zidibanisa umhlaba nezulu, ukusuka eluVukweni lukaKrestu ukuya ekubekweni uKrestu ezulwini. Ukuze ufunde okungakumbi malunga Iimfihlakalo irosari Uzuko, qhubeka ufunda.
Dibana nemfihlakalo ezukileyo Ingcwele yeRosari.
1 Iimfihlakalo ezizukileyo zeRosari
1.1 Imfihlelo yokuqala ezukileyo: Uvuko loNyana kaThixo
1.2 Imfihlelo yesiBini ezukileyo: Ukunyuka kweNkosi ezulwini
1.3 Imfihlakalo yesithathu ezukileyo: Ukuhla koMoya oyiNgcwele
1.4 Imfihlakalo yesine ezukileyo: Ukunyuselwa kukaMariya ezulwini
1.5 Imfihlakalo yesihlanu ezukileyo: Ukubekwa kukaMariya njengoKumkanikazi kunye neNkosikazi yayo yonke indalo
1.6 Uyithandaza njani iRosari eZukileyo yeMfihlakalo?
1.6.1 Utata wethu
1.6.2 I-Ave María
1.7 Iincwadi zeNtombikazi
Ukuqala kwiziko leemfihlakalo ezikhanyayo ezinikezwe nguPopu John Paul II, uzigcina ngoLwesithathu nangeCawa ukuba acamngce kwaye athandaze iimfihlakalo ezizukileyo. Oku kubandakanya ukutyunjwa kwesiLatin phakathi kwabazali emva kwegama lemfihlelo nganye. Ngoku Landelayo.
Imfihlelo yokuqala ezukileyo: Uvuko loNyana kaThixo
«Ngosuku lokuqala lweveki, kwakusasa kakhulu, baya engcwabeni bephethe amavumba ababewalungiselele. Kodwa bafumanisa ukuba ilitye lisusiwe engcwabeni, kwaye bangena, kodwa abawufumananga umzimba weNkosi uYesu. Babengazi ukuba benze ntoni ngeli xesha kwafika amadoda amabini anxibe iilokhwe ezibengezelayo phambi kwabo. Bangenwa luloyiko, bajonga emhlabeni, baza bathi kubo: «Kutheni nimfuna nje umntu ofileyo phakathi kwabafileyo? Akakho apha, uvukile ”(Lk 24: 1-6).
Emva kokuthatha ikhefu elifutshane lokucingisisa ngaphambi kwala magama, kufuneka sithandaze uBawo Wethu Osezulwini, ooHalal Marys bethu abalishumi kunye noZuko, bafikelele esiphelweni ngokuthandaza Imfihlelo yokuqala eQhelekileyo enikezelwa kwirosari.
Imfihlelo yesiBini ezukileyo: Ukunyuka kweNkosi ezulwini
"INkosi uYesu, emva kokuthetha nabo, yenyuka yaya ezulwini, yahlala ngasekunene kukaThixo" (Mk 16:19).
Imfihlakalo yesithathu ezukileyo: Ukuhla koMoya oyiNgcwele
“Xa umhla wePentekoste wafikayo, babehlanganisene bonke ndaweni-nye. Ngequbuliso kweza ezulwini isandi esinjengesomoya ovuthuza ngamandla, sayizalisa indlu yonke ababekuyo. Iilwimi ezinjengomlilo zabonakala kubo, zahlulahlulwa zaza zahlala kuye ngamnye wabo; Bazaliswa bonke nguMoya oyiNgcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi, njengoko uMoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. ”(Izenzo 2: 1-4).
Imfihlakalo yesine ezukileyo: Ukunyuselwa kukaMariya ezulwini
"Zonke izizukulwana ziya kuthi ndibusisiwe ngenxa yokuba iNkosi indenzele imisebenzi emikhulu" (Lk 1: 48-49).
Imfihlakalo yesihlanu ezukileyo: Ukubekwa kukaMariya njengoKumkanikazi kunye neNkosikazi yayo yonke indalo
«Kwabonakala umqondiso omkhulu esibhakabhakeni: umfazi, enxibe ilanga, ene la luna phantsi kweenyawo zakhe, nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini entlokweni yakhe ”(IsiTy. 12: 1).
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba esiphelweni semfihlakalo nganye, kufuneka sithathe ikhefu elifutshane ukuze sicingisise kwaye njengoko sikulo msebenzi, kufuneka sithandaze uBawo Wethu, Ishumi Liyabulela uMariya kwaye sigqibe ngoGloria.
Uyithandaza njani iRosari eZukileyo yeMfihlakalo?
Akukho bunzululwazi buninzi xa kufikwa ekuthandazeni iirosari zethu, ziyakuhlala zifana nezi sizaziyo, umahluko kuphela kukuba ngesiqhelo, kuxhomekeke kwizizathu zokuba sithandaze, ezinye iinguqu ziyenziwa okanye imithandazo emitsha iyenziwa. Phelelisa imithandazo. Njengakuwo nawuphi na umthandazo siqala ngokwenza uphawu lomnqamlezo; Egameni loYise neloNyana nelikaMoya oyiNgcwele. Kwaye siqala ngomthandazo.
Thixo wam, yiza undincede.
Nkosi, khawuleza undincede.
Uzuko kuye uYise nakuNyana nakuMoya oyiNgcwele.
Njengoko kwakunjalo ekuqaleni, ngoku nangonaphakade,
ngonaphakade ngonaphakade. Amen.
Emva koku, "imfihlakalo" ichazwa kwishumi ngalinye, umzekelo; kwimfihlelo yokuqala: "Ukuzalwa kwakhona koNyana kaThixo." Ekupheleni kwekhefu elifutshane lokucingisisa, bayathandaza: omnye uBawo wethu, abaShumi baKhoze uMarys kunye noGloria omnye. Kulandelwe yiyo. Ukucela kungongezwa kwishumi ngalinye "kwirosari". Kwaye ekupheleni kweRosari iLauretan Litany iyafundwa, okanye eminye imithandazo yaseMarian kuxhomekeke kwizizathu zokuthandaza.
Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho, mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, uxolele izono zethu, njengoko nathi sibaxolela abo basonayo. Ungasingenisi ekuhendweni, kwaye usihlangule ebubini. Amen.
Awu Mariya, uzele lubabalo, iNkosi inawe. Usikelelwe wena phakathi kwabafazi bonke, sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho, Yesu. UMariya oNgcwele, Mama kaThixo, sithandazeleni thina boni, ngoku nakwilixa lokufa kwethu. Amen.
Uzuko kuye uYise nakuNyana nakuMoya oyiNgcwele. Njengokuba kwakunjalo ekuqalekeni ngoku, nangonaphakade, naphakade. Amen.
Dumisani uThixo, u-Queen kunye noMama wenceba, ubomi bethu, ubumnandi bethu kunye nethemba lethu, uThixo akusindise.
Sikubiza ngokuba ngoonyana bakaEva abathinjiweyo; kuwe siyancwina, siyancwina kwaye siyalila, kule ntlambo yeinyembezi. Yiza, ke, Nenekazi, ummeli wethu, buyela kuthi loo mehlo akho anenceba, kwaye, emva kokudingiswa, sibonise uYesu, isiqhamo esisikelelekileyo sesibeleko sakho. Owona unenceba, uyakholelwa, uyintombi entle kaMariya!
Iinkonzo zeNtombikazi, sisicelo esenziwa kuThixo, zizibhengezo ezenziwe ekupheleni kweRosari eNgcwele, nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba zinokusetyenziswa nangaliphi na ixesha, kodwa ukusetyenziswa kwazo kuhambelana ngokubanzi ngokuzinikela ukuba unayo iRosari eNgcwele yeNtombikazi kaMariya. Ngesi sizathu, eyona ixhaphakileyo kukwenza emva kokugqiba iimfihlakalo.
Ungalibali ukuba ungathandaza iirosari zakho nangaliphi na ixesha ofuna ngalo. Ukuba uluthandile olu lwazi, ungalibali ukundwendwela iwebhusayithi yethu ukuze uthandaze ngakumbi Zingaphi iimfihlakalo ezenziwa yirosari?. Ngokukwanjalo, sikushiya le vidiyo ilandelayo ukuze wazi ukuba ungayenza njani iRosari yakho engcwele kunye neemfihlakalo eziZukileyo.
Umthandazo wokusikelela indlu